Ahoana ny fametrahana iPhone amin'ny Mode DFU, ny fomba Apple - Iphone
maninona no tsy fantatrao i iphone amin'ny iphone-ko
bokotra fatoriana tsy mandeha
ny iphone x tsy tantera-drano?
Ahoana ny fametrahana iPhone amin'ny Mode DFU, ny fomba Apple
DFU dia mijoro Fanavaozana ny mikirao praogramanao Device , ary io no karazana famerenana amin'ny laoniny lalina azonao atao amin'ny iPhone. Ny manam-pahaizana momba ny firaka Apple dia nampianatra ahy ny fametrahana iPhones ao amin'ny maody DFU, ary amin'ny maha teknolojia an'i Apple ahy dia nahavita an-jatony aho.
Mahagaga fa mbola tsy nahita lahatsoratra iray hafa manazava ny fomba hidirana amin'ny maody DFU aho tamin'ny fomba nampiofanina ahy. Betsaka ny vaovao ao diso fotsiny . Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho inona ny maody DFU , ny fomba fiasan'ny firmware amin'ny iPhone-nao , ary asehoy anao tsikelikely Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU ny iPhone anao.
Raha aleonao mijery toy izay mamaky (raha ny tena izy, dia mety samy manampy ny roa), dia midira any amin'ilay vaovao Lahatsary YouTube momba ny maody DFU sy ny fomba famerenana amin'ny laoniny iPhone ny iPhone .
Ny zavatra tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohantsika
ny Button an-trano dia ny bokotra boribory eo ambanin'ny fisehoan'ny iPhone anao.
ny Bokotra fatoriana / mifoha no anaran'ny Apple an'ny bokotra herinaratra.
Mila a fameram-potoana manisa hatramin'ny 8 segondra (na azonao atao an-doha izany).
Raha azonao atao, avereno alefa ilay iPhone-nao iCloud , iTunes , na Finder alohan'ny hametrahana ny iPhone amin'ny fomba DFU.
VAOVAO: Macs mihazakazaka macOS Catalina 10.15 na mampiasa Finder vaovao hamerenana iPhones ny iPhone.
Ampidiro ao anaty solo-sainanao ny iPhone-nao ary sokafy iTunes raha manana a Mac mandeha macOS Mojave 10.14 na PC . Misokatra izay nahita raha manana a Mac mihazakazaka macOS Catalina 10.15 na vaovao . Tsy maninona na mandeha na maty ny iPhone-nao.
Tsindrio ary tazomy ny bokotra Torimaso / Mifohaza ary ny bokotra an-trano (iPhone 6s sy ambany) na ny bokotra bokotra ambany (iPhone 7) miaraka mandritra ny 8 segondra.
Aorian'ny 8 segondra, alefaso ny bokotra Torimaso / Mifoha fa tohizo ny fihazonana ny bokotra Home (iPhone 6s sy ambany) na ny bokotra ambany (iPhone 7) mandra-pisehoan'ny iPhone anao ao amin'ny iTunes na Finder.
Alefaso ny bokotra Home na bokotra midina. Ho mainty tanteraka ny seho an'ny iPhone raha niditra tamin'ny fomba DFU tamim-pahombiazana ianao. Raha tsy izany dia andramo indray hatrany am-piandohana.
Avereno amin'ny laoniny ny iPhone ampiasainao amin'ny iTunes na Finder.
Ahoana ny fametrahana iPhone 8, 8 Plus, na X amin'ny maody DFU
Tranonkala maro hafa no manome dingana diso, mamitaka, na be loatra rehefa milaza aminao ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone 8, 8 Plus, na X. Dompon'izy ireo ianao dia hoentin'izy ireo ianao hamono ny iPhone aloha, izay tena tsy ilaina mihitsy. Ny iPhone-nao dia tsy voatery ho faty alohan'ny hametrahanao azy amin'ny DFU Mode .
Raha tianao ny horonan-tsarinay dia jereo ny momba ilay horonantsarinay YouTube vaovao Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU ny iPhone X, 8, na 8 Plus anao . Raha aleonao ny mamaky ny dingana, ny dingana dia tena mora lavitra noho izy ireo mamorona azy! Ny dingana dia manomboka toy ny famerenana mafy.
Avereno amin'ny DFU ny iPhone X, 8, na 8 Plus anao, tsindrio haingana ary alefaso ny bokotra miakatra ambony, avy eo dia tsindrio haingana ary alefaso ny bokotra ambany, ary avy eo dia tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pahazon'ny mainty ny lamba.
Raha vantany vao lasa mainty ny efijery dia tsindrio ary tazomy ny bokotra midina rehefa manohy mitazona ny bokotra sisiny.
Aorian'ny 5 segondra, alefaso ny bokotra sisiny fa tohizo ny fitazonana ny bokotra midina mandra-pisehon'ny iPhone amin'ny iTunes na Finder.
Raha vantany vao miseho amin'ny iTunes na Finder izy dia alefaso ny bokotra volume. Ta-da! Ny iPhone-nao dia amin'ny maody DFU.
Fanamarihana: Raha miseho eo amin'ny efijery ny sary famantarana Apple dia notazoninao ela loatra ilay bokotra ambany. Atombohy hatramin'ny voalohany ny dingana ary andramo indray.
Ahoana ny fametrahana iPhone XS, XS Max, na XR amin'ny maody DFU
Ny dingana hametrahana iPhone XS, XS Max, XR amin'ny maody DFU dia mitovy tanteraka amin'ireo dingana amin'ny iPhone 8, 8 Plus, ary X. Zahao ny lahatsarinay YouTube momba ny fametrahana iPhone XS, XS Max, na XR amin'ny maody DFU raha mianatra sary maso kokoa ianao! Mampiasa ny iPhone XS-ko izahay hitetezana anao isaky ny dingana rehetra.
Ahoana ny fametrahana iPhone 11, 11 Pro, na 11 Pro Max amin'ny maody DFU
Azonao atao ny mametraka iPhone 11, 11 Pro, ary 11 Pro Max amin'ny maody DFU amin'ny fanarahana ireo dingana mitovy amin'ny ataonao amin'ny iPhone 8 na vaovao kokoa. Zahao hoe ny lahatsarinay YouTube raha mila fanampiana ianao mandritra ny fizotrany.
Raha aleonao mijery fa tsy mamaky…
Zahao ny tutorial YouTube anay momba ny fomba fametrahana iPhone ao anaty maody DFU sy ny fomba fanatanterahana famerenana amin'ny laoniny DFU raha tianao ny hahita azy io amin'ny asany.
Rehefa averinao amin'ny laoniny ny iPhone-nao, dia hamafa ny solo-sainanao ireo kaody izay mifehy ny rindrambaiko SY fitaovana amin'ny iPhone. Misy ny mety ho zavatra tsy mandeha.
Raha simba amin'ny fomba rehetra ny iPhone, ary indrindra raha simba rano izany dia mety hamaky ny iPhone ny famerenana amin'ny laoniny DFU. Niara-niasa tamin'ny mpanjifa izay nanandrana namerina ny iPhones azy ireo aho mba hamahana olana madinidinika, saingy ny rano kosa nanimba singa iray hafa izay nanakana ny famerenana amin'ny laoniny. Ny iPhone azo ampiasaina amin'ny olana madinidinika dia mety hanjary tsy hampiasaina tanteraka raha toa ka tsy mahomby ny famerenana amin'ny laoniny DFU noho ny fahasimban'ny rano.
Inona ny firmware? Inona no ataony?
Firmware dia ny programa izay mifehy ny fitaovan'ny fitaovanao. Ny rindrambaiko dia miova amin'ny fotoana rehetra (mametraka app ianao ary misintona mailaka vaovao), tsy miova mihitsy ny fitaovana (antenaina fa tsy manokatra ny iPhone-nao ianao ary mandamina ny singa ao anatiny), ary ny firmware saika tsy miova mihitsy - raha tsy hoe manana mankany
Inona avy ireo fitaovana elektronika hafa manana mikirao praogramanao?
Izy rehetra! Eritrereto izany: ny milina fanasan-damba, ny fanamainana, ny fahitalavitra lavitra ary ny microwave anao dia mampiasa firmware avokoa mba hifehezana ny bokotra, ny timer ary ny fiasa fototra hafa. Tsy azonao ovaina izay ataon'ny setting Popcorn amin'ny microwave anao, noho izany tsy rindrambaiko - firmware io.
Averina amin'ny laoniny ny DFU: tontolo andro, isan'andro.
Ny mpiasan'ny Apple dia mamerina iPhones be dia be. Nomena ny safidy, tiako foana misafidy famerenana DFU amin'ny famerenana amin'ny laoniny maody na maody. Tsy politikan'ny Apple ofisialy izany ary ny teknolojia sasany dia hilaza fa be loatra ny fihoaram-pefy, saingy raha manana olana izany ny iPhone afaka voavaha amin'ny famerenana amin'ny laoniny, ny famerenana amin'ny laoniny DFU no mety indrindra hanitsiana azy.
Misaotra tamin'ny famakiana ary antenaiko fa ity lahatsoratra ity dia manazava ny sasany amin'ireo diso fampahalalana diso amin'ny Internet momba ny fomba hidirana amin'ny maody DFU sy ny antony itiavanao hampiasa azy. Mamporisika anao aho hamihina ny geekiness ao anaty ao aminao. Tokony hirehareha ianao! Azonao atao izao ny miteny amin'ny namanao (sy ny zanakao) hoe: “Ie, haiko ny fomba hamerenan'ny DFU ny iPhone-ko.”
Misaotra tamin'ny famakiana sy ny tsara indrindra,